Kooxo hubaysan oo maanta weriye Tima-cade ku dhaawacay degmada wadajir ee Muqdisho – Radio Daljir
Oktoobar 22, 2013 3:54 b 0
Muqdisho, October 22, 2013 – Kooxo aan la aqoon balse loo badinayo in ay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa maanta dhaawac halis ah u gaystay weriyaha Tv-ga Universal ee Muqdisho Maxamed Maxamuud Tima-cade, xili uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala Muqdisho.
Degmada wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu dhaawacay weriye maxamed Maxamuud Timacade oo ka tirsanaa howl-wadenada Universal ee magaalada Muqdisho, kooxo hubaysan ayaa weriyaha rasaas la dhacay.
?Kooxo hubaysan oo baabuur wata ayaa weriyaha oo gaari kale watay soo agdhigtay baabuurka kadibna ku dhuftay lix xabadood oo qaarka hoose ilaa qaar sare gaaray.? Ayuu yiri xubin ka tirsan Universal oo saxaafada la hadlay.
Cisbitalka Madiina ee Muqdisho ayaa haatan lagu dabiibayaa weriye Timacade, wararka ayaa xaqiijiyey in kooxihii dilka gaystay ay si dhaqso ah uga caraareen goobta ay weriyaha ku dhaawaceen, warar ayaa sheegaya in kooxda Al-shabaab dhowr jeer hanjabaado u dirtay Tima-cade.
Degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa sanadihii tegay lagu dilay dhowr weriye oo ka howl-gelayey caasimada, Soomaaliya ayaa la sheegaa in ay tahay halka ugu khatarta badan ee weriyaasha caalamka ay ka shaqeeyaan.
Baahin: Isniin, 21 Oct 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Macamed C Cali (Kooshin) ~ Muqdisho